Ogaden News Agency (ONA) – (كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهَ) Imisay koox yari ka guulaysatay koox badan idanka Ilaahay!- By: Xaaji M/rashiid.
(كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهَ) Imisay koox yari ka guulaysatay koox badan idanka Ilaahay!- By: Xaaji M/rashiid.
Posted by Daljir	/ December 24, 2017
(كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهَ)
Imisay koox yari ka guulaysatay koox badan idanka Ilaahay!- By: Xaaji M/rashiid
Allaahu Akbar- doorkan waan faraxsanahay waxaana iigu wacan markaan arkay dadkayga oo diyaar u ah inay hantaan dalkooda hooyo, markaan arkay inay u adkaysteen duruufaha adag, markaan arkay inay umadihii la adoonsanayay dabka ushideen iyo kooxdii doolka aheyd oo banaan cidla ah kusoo dhacday, isla markaana ku hongoobay dhamaan ididiiladii ay lahaayeen.
Waxaa intaa u dheer iyagoo ka cabsanaya dakanihii faraha badnaa ee habeen iyo maalinmba ay galayeen oy ciqaabtiisii soo dhawaatay. Waxaa kale oo muuqata inay dhuumashada ukala badinayaan iyagoo kii fursad helaaba hoosta ka guurayo, Xaalkooduna yahay- Ninkii dhulka jooga dhurwaagu haqaado, balse waxayna ku xisaabtamin in dulmanayaashii iyo dadkoodiiba ay ku noolyihiin wadamada ay magan galayaan!
Hadaan intaa kaga gudbo hordhaca qoraalkan waxaa muhiim ah in Halgamaagu goor walba soo jeedo sababkoo waxaa la marayaa waqti kala guur ah gaar ahaan markaan qiimeeyo marxaladda lajoogo. Waxaad la socotaan in wadankii itoobiya lagu naanaysi jiray uuna jirin gobol gobol kale dabka ka qaadanaya! Inuuna jirin gobol kan kale Sonkor waydiisanaya! Sidoo kale inuuna jirin gobol kakale Salaanta ka qaadaya! Inuuna jirin wax wafdi ah oo ukala gooshta wadanka dhexdiisa maadaama oy ogyihiin inaan la rabin.
Waxaa intaas oo dhan kasii daran waxaa ka bakhtiyay dabkii Internetka taasoo ka dhigan inuu dalkii isu badalay guri mugdi ah waxayna sahleysaa inay durba ka guuraan Safaaradaha iyo Ajaanibta kalaba iyagoo beegsanaya Nayrobi iyo kolba meshii dagen ee dab ka shidanyahay! Sidaad ogtihiin akhyaareey ururwynaha ONLF wuxuu xambaarsanyahay qadiyadda iyo masiirka Ogadenya. Ururku kii taageera isagaa matala, kii aan taageerina isgaa matala. Qadiyadda meeshuu ka taaganyahayna waxaa qiraya cadowga iyo dunida inteeda kale ee xaalka lasocota. Ururku wuxuu muujiyay karti dheeraad ah qadiyadana inuu meel saari doono way muuqataa.
Maxaa la gudboon dulmanaha Ogadenya udhashay? Waxaa la gudboon dulmane kasta inuu xidhiidh layeesho taageerana siiyo xaq udirirka ONLF. Dadka faraha badan ee calaacalaya waxaa u wanaagsan inay wax fahmaan oy naftooda lugooyada ka daayaan. Uma haboona inay meel lagu kala tagayo oo xafiis si sax ah u shaqeynayaa uuna jirin inay ku hor calaacalaan! Uma haboona inay ku hor calaacalaan madax kusheegyada mid waliba gaadayo fursadii iyo dalkii uu ubaxsan lahaa! inaad xaqiinii heshaan waxaa idiinku dhow inaad Ururwaynaha ONLF naf iyo maalba isla garab taagtaan. insaanka been waa loo sheegi karaa laakiin ma’aha in waligiiba been loo sheego isna iska sii cabo!
Dadka shakisan waxay ku doodayaan- waynu tabar yarnahay oo waa la inaga badan yahay, laakiin miisaankaasi waa mid inta badan kasoo fula dadka aragtida gaaban. Bal horta ogaada waxaynu nahay dad muslimiin ah oo iimaan leh oo Qur’aanka iyo wuxuu sheegayo rumaysan. Qur’aankuna wuxuu tilmaamayaa inay dhici karto in koox yari ka guulaysato koox kale oo badni sheeganaysa, Taariikhduna waxay sugaysaa kuwo tiro yar iyo kuwo tiro badani inay foodda is dareen, kadibna la jabiyay kuwii tirada badnaa! Akhristow Aayadan ayaa cadeynaysa arintaas ee dhugo- (كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّه imisay koox yari ka guulaysatay koox kale oo badan idanka Ilaahay
Hadaan hoos ugu sii yara siqo dhuuxa qoraalka waxaan dadkayga sharafta leh u sheegi lahaa in ruux walba ay xornimadu u bilaabatay markuu halganka kusoo biiray, isagoo marka koobaad ay naftiisu noolaatay isla markaana ay ogaatay inay wax ka badali karto loolanka wadankiisa kasocda. Xusuuso ruux waloowba maxaad ahayd kahor intaadan halganka kusoo biirin. Waxaad ahayd qof aan hadaf iyo yool midna lahayn oo iska nool wax saamayn ahna maadan kulahayn siyaasadda dalkaaga ka socoto.
Dushaada ayaa lagu shaxayay kolbana shir ay dad leeyihiin oo laga yaabo inuu qabyaalad xambaarsanyahay ayaad ka qayb gali jirtay. Majirin wax yool ah oo la taaban karo ood lahayd. Halgamoow waxaad ka kortay qabyaaladii iyo afkaartii daciifka aheyd ee soomaalida halaagtay. Waxaa kale ood ka kortay inaad iska noolaato, maantana waxaad higsaneysaa xorriyad buuxda iyo dawladnimo. Halganka ogadenya kasocda ee ay wadaan shacabwaynuhu Ururka ONLFna hormuudka uyahay, wuxuu marayaa heer in iyaga wax laga waydiiyo mooyee ayna jirin cid kale oo wax sameyn karta..
Warka ugu danbeeya ee kasoo baxaya Taliska woyaanaha iyo caasimadooda Adis wuxuu tibaaxayaa inayna jirin wax dawladnimo ah iyo maamulkeed. Sidoo kale inayna jirin cid ka haybaysanaysa TPLF haday shacab tahay iyo haday siyaasi tahayba!. Mar haday dawlad Afrikaan ahi heerkaas soo gaadho shaki kuma jiro inay burburayso, kuwa wali sii daba socdana waxaa la joogaa waqtigii ay ka xidhiidh furan lahaayeen si ayna qabtu ugu dhicin iyagoo meel tuban oo hurumar aan jirin ka sheekaynaya!
Gabagabada maqaalka waxaan codheer kusheegayaa- haduuna jiri lahayn Afka iyo Addinka wada socda ee Ururwaynaha ONLF kala hortagay kooxda dad,qalatada ah ee Tigreega inay liqi lahaayeen magaca soomaaliyeed meel uu joogaba waa siday ila tahay.
Su’aal iyo Jawaab- Guusha yaaleh? Jabhadda Xoreynta Ogadenya JWXO-